China Powder Packaging Line fanamboarana sy orinasa | tampon
Tao anatin'ny folo taona lasa, dia namolavola vahaolana fonosana an-jatony ho an'ny mpanjifantsika izahay, manome fomba fiasa mahomby ho an'ny mpanjifa amin'ny faritra samihafa.
Shanghai Tops Group Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina amin'ny rafitra fonosana vovoka sy granular. Mamaritra amin'ny sehatry ny famolavolana, ny famokarana, ny fanohanana ary ny servisy milina feno ho an'ny karazana vovoka sy vokatra granular. Ny tanjonay voalohany amin'ny fiasana dia ny manolotra ireo vokatra mifandraika amin'ny indostrian'ny sakafo, indostrian'ny fambolena, indostrian'ny simika, ary ny sehatry ny farmasia sy maro hafa.
Ity tsipika famokarana ity dia misy mixeur. Ny fitaovana dia apetraka amin'ny mixers amin'ny tanana.
Avy eo ny zavatra akora dia afangaro amin'ny mixer ary hiditra ny hopper tetezamita ny feeder. Avy eo dia hampidirina sy halefa any amin'ny hopper of auger filler izy ireo izay afaka mandrefy sy mizara fitaovana amin'ny habetsany.
Auger filler dia afaka mifehy ny fiasan'ny feeder screw, ao amin'ny hopper filler auger, misy sensor sensor, manome famantarana ny feeder screw raha ambany ny haavon'ny materialy, dia mandeha ho azy ny feeder screw.
Satria ny fitsipiky ny fandrefesana ny mpameno auger dia ny fizarana ny fitaovana amin'ny alàlan'ny visy, ny fahamarinan'ny visy dia mamaritra mivantana ny fahamarinan'ny fizarana ny fitaovana.
Ny milina TOPS rehetra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 304, ny vy tsy misy fangarony 316 dia azo zakaina arakaraka ny karazan-toetra isan-karazany toy ny fitaovana manimba.
Raiso ny famolavolana hopper an'ny mpameno auger ohatra, Talohan'izay, ny hopper dia natambatra hopper ambony sy ambany ary tsy mora hanaparitahana sy hadio.
Ny milina TP-PF Series rehetra dia voarafitra amin'ny alàlan'ny efijery PLC sy Touch, ny Operator dia afaka manitsy ny lanjan'ny famenoana ary manao ny fari-pandrefesana eo amin'ny efijery mivantana.
SHANGHAI TOPS dia namolavola vahaolana fonosana mifangaro an-jatony, malalaka hifandray aminay hahazoana ny vahaolana fonosanao.
Teo aloha: Milina fonosana mitsangana ho azy
Manaraka: Paddle Mixer
Masinina mameno vovoka Auger
Mpanafaka vovoka maina
Masinina mameno vovoka maina
Masinina mameno tavoahangy vovoka
Milanja vovoka sy milina famenoana
Masinina mameno vovoka kely